2GB Dhibaatada Faylka PST. Dhibaatada Faylka ee PST
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Dhibaatada faylka PST ee xad dhaafka ah (cabirka faylka PST wuxuu gaarayaa ama dhaafaa xadka 2GB).
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan Dhibaatada Faylka ee PST
Waa maxay Dhibaatada Faylka ee PST?
Microsoft Outlook 2002 iyo qoraalkii hore waxay ku xaddidayaan cabirka faylka shaqsiyadeed (PST) 2GB. Mar kasta oo faylka PST uu gaaro ama ka gudbo xadkaas, ma awoodi doontid inaad furto ama rarto mar dambe, ama kuma dari kartid wax xog cusub ah. Tan waxaa loogu yeeraa dhibaatada faylka PST ee weyn.
Muuqaalku ma laha qaab dhisme oo lagu badbaadiyo faylka weyn ee PST ee aan la geli karin. Si kastaba ha noqotee, Microsoft waxay bixisaa qalab dibedda ah pst2gb oo ah qalab kumeel gaar ah, kaas oo ku soo celin kara feylka xaalad la isticmaali karo. Laakiin xaaladaha qaarkood, qalabkani wuxuu ku fashilmayaa soo celinta faylasha weyn. Oo xataa haddii hawsha dib u soo celinta ay ku guuleysato, xogta qaar ayaa la jarin doonaa oo lost joogto ah.
Microsoft sidoo kale waxay sii deysay xirmooyin dhowr ah oo adeeg ah si marka faylka PST uu u dhawaado xadka 2GB, Muuqaalka uusan ku dari karin xog cusub. Farsamadan, illaa xad, waxay ka hortagi kartaa faylka PST inuu weynaado. Laakiin marka xadka la gaaro, si dhib yar ayaad ku qaban kartaa hawlgallada midkood, sida dirista / helitaanka emaylka, samee qoraallo, ballamo cayiman, iwm, illaa aad ka saarto xogta badan faylka PST iyo isafgaradka intaas ka dib si loo yareeyo cabbirkeeda. Tani waa mid aan ku habbooneyn marka xogta Muuqaalka ay weynaato oo weynaato.
Laga soo bilaabo Microsoft Outlook 2003, qaab fayl PST cusub ah ayaa la isticmaalaa, kaas oo taageera Unicode oo aan lahayn xaddiga cabbirka 2GB wixii intaa ka badan. Sidaa darteed, haddii aad isticmaaleyso Microsoft Outlook 2003 ama 2007, oo faylka PST lagu abuuray qaabka cusub ee 'Unicode', markaa uma baahnid inaad ka walwasho dhibaatada weyn.
1. Markaad isku daydo inaad rarto ama aad gasho feyl aad u weyn oo Muuqaalka PST ah, waxaad arki doontaa farriimo qalad ah, sida:
Khaladaad ayaa lagu ogaaday feylka xxxx.pst. Jooji dhammaan codsiyada ku shaqeeya boostada, ka dibna isticmaal Qalabka Dayactirka Sanduuqa.
meesha 'xxxx.pst' uu yahay magaca faylka Muuqaalka PST ee lagu rakibayo ama la galayo.
2. Markii aad isku daydo inaad ku darto fariimo ama shay cusub faylka PST, iyo inta lagu guda jiro hawsha ku darista, faylka PST wuxuu gaarayaa ama dhaafayaa 2GB, waxaad ka helaysaa Muuqaalka kaliya inuu diido inuu aqbalo xog kasta oo cusub asagoon wax cabasho ah qabin, ama waad arki doontaa fariimaha qaladka, sida:
Faylka laguma dari karin galka. Tallaabada lama dhammaystiri karin.
Task 'Microsoft Exchange Server - Helitaanka' khalad la soo sheegay (0x8004060C): 'Khalad aan la aqoon 0x8004060C'
Faylka xxxx.pst wuxuu gaadhay cabirkiisii ​​ugu badnaa. Si loo yareeyo xaddiga xogta ku jirta faylkan, xulo shayada qaarkood oo aanad mar dambe u baahnayn, ka dibna si joogto ah (u wareeg + del) tirtir.
Sida kor ku xusan, Microsoft ma laha wado lagu xallin karo dhibaatada faylka PST ee aadka u weyn. Xalka ugu fiican waa sheygayaga DataNumen Outlook Repair. Waxay soo kaban kartaa faylka PST-ga ee weyn oo aan lahayn wax khasaaro xog ah. Si tan loo sameeyo, waxaa jira laba habab oo kale:
Haddii aad haysato Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo ku rakiban kombuyuutarkaaga, markaa waad awoodi kartaa u rogo feylka weyn ee PST qaabka cusub ee 'unicode' ee Muuqaalka 2003, taas oo aan lahayn xadka 2GB. Tani waa habka la doorbido.
Haddii aadan haysan Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya, markaa waad awoodi kartaa u kala qaad faylka weyn ee PST dhowr faylal yaryar. Fayl kastaa wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah xogta faylka asalka ah ee PST, laakiin wuu ka yar yahay 2GB oo wuu ka madax banaan yahay kuwa kale si aad si gooni ah ugula soo bixi karto Muuqaalka 2002 ama noocyada hoose iyada oo aan wax dhibaato ahi ka jirin. Habkani waa wax yar oo aan habooneyn maadaama aad u baahan tahay inaad maamusho faylal badan oo PST ah ka dib hawlgalka kala qaybinta.